Izinyane leMbube likhuthaza ukuthuthuka kwabeSantaco KwaZulu-Natal – Sivubela intuthuko Newspaper
Izinyane leMbube likhuthaza ukuthuthuka kwabeSantaco KwaZulu-Natal
UMNTWANA uNhlanganiso Zulu ekhuluma e-Ritief Street Taxi Rank eMatsheni eMgungundlovu
IZINYANE leMbube uMntwana uNhlanganiso Zulu likhuthaza abemboni yamatekisi iSantaco KwaZulu-Natal ukuziqalela amabhizinisi abo azolekelela le mboni njengokuthi babe namagalaji kaphethiloli nama-spares lapho beziodayiselana bodwa izinsimbi zezimoto zabo.
UMntwana uNhlakanipho ukhthaze kanje abeSantaco emhlanganweni obuholwa nguSihlalo wayo le nhlangano KwaZulu-Natal uMnu Boy Zondi ephelezelwa ngozihlalo bezifunda. UMntwana uNhlanganiso uthe ukusho lokhu ngoba ufuna okungenani kube nomlando ogqamayo wokuthi enye yezimboni zabantu abamnyama iyaphila kungabi ngukuthi bathembela ekuthengeni izimoto kuphela kodwa ukuzilungisa baya kwabezinye izinhlanga.
Okunye aqinise kukhona kakhulu uMntwana uNhlakanipho ngukuqikelela ukuzinakekela ngokwempilo kubantu. “Ngicela kwiSantaco inginikeze imvume yokuhambela amarenki kusona sonke isifundazwe sakithi ngizokhuluma nabashayeli sifundisane ngomsebenzi wendoda ngoba abanye bazi ukuthi indoda yindoda ngamalengiso kanti lokho kukodwa kakuphelele. Ngikholwa ngukuthi uma kuqiniswa umkhankaso wokuthanda impilo kubashayeli isizwe samaZulu singaba ngesiphilileyo. Ngifuna ukukhuluma nabashayeli bamatekisi ngoba ngiyabathemba ukuthi singawenza kahle umsebenzi wezempilo ngokubambisana nabo njengoba besondelene kakhulu nabantu ngakho kungaba lula ukuba ngumlomo kahulumeni ekuqinisekiseni impilo enhle,” kubeka uMntwana uNhlanganiso.UMnu Zondi ekhuluma ngokuthuthukiswa kohlelo lokuthuthwa kwabantu ubonge uhlelo lwabo lukaHlokomela athi liwenzile umehluko ngokunikeza isithunzi esihloniphekile umgibeli. “Selokhu sakhipha uHlukomela ukuba uye ngqo emigwaqweni kasikaze sithole izikhalo zokugitsheliswa kwabagibeli baze beqe isibalo esivumelekile. Osekusikhathaza manje ngukushayeliswa kabi kwabashayeli bethu njengoba ezingozini ezimbili ezinyantisa igazi ezenzeke KwaNongoma naseWatrburg kuyavela ukuthi abashayeli bethu kabenzanga lutho oluyiphutha ngamaloli asuka emizileni yawo atholana phezulu nalamatekisi kwafa abantu. Siyanxusa kubashayeli ukuba mababekezele emgaqweni ngoba ukuba nezinhliziyo ezingaphandle kushiya imizi eminingi ivaliwe. Siyakhalisana nemindeni eshonelwa ngamalungu ayo esezimotweni zethu njengoba nakithina kuba buhlungu,” kusho uMnu Zondi.
LIGILE IZIMANGA IDOLOBHA ITHEKU LIHLOMULA NGENQWABA YEZINDONDO KWEZOKUVAKASHA